Tag: dhageysiga warbaahinta bulshada | Martech Zone
Tag: dhageysiga warbaahinta bulshada
Suuqgeynta Khoros: Suuqgeynta iyo Maareynta Warbaahinta Bulshada ee Ganacsiga
Khoros wuxuu ka caawiyaa magacyada waaweyn inay abaabulaan, xukumaan, daabacaan, oo cabiraan ololayaasha warbaahinta bulshada ee wada natiijooyinka ganacsiga. Sidee Khoros 'Platform Media Social Platform' uga Caawiyaa Waxtarka Kooxda Ganacsiga - Keen dhammaan kooxahaaga, kanaalada, iyo waxyaabaha ku jira hal madal oo si fudud loo qaadan karo. Maamul ololeyaasha warbaahinta bulshada iyo wada sheekaysiga waqtiga-dhabta ah oo ku yaal hal shaashad keliya oo leh hufnaan iyo aragti weyn. Sare u qaad mawduucaaga - Wada-shaqee, qorshee, oo maamul ololeyaal bulsheed oo bartilmaameed ah oo dhiirrigeliya isku xirnaanta dhagaystayaashaada. Aragtida mideysan ee waxqabadka
Talaado, Nofeembar 19, 2019 Talaado, Nofeembar 19, 2019 Thibaud Clement
Asal ahaan, warbaahinta bulshada waa waddo laba dhinac ah, halkaas oo astaamaha ay ka gudbi karaan suuq-geynta dhaqameedka, oo runtiina la macaamilaan macaamiishooda si ay u horumariyaan daacadnimo waqti ka dib. Halkan waxaa ah seddex talo oo ay shirkaddaadu u adeegsan karto inay si fiican ugu xirmaan macaamiishaada warbaahinta bulshada. Talo # 1: Samee Nidaam Si Aysan Waligaa U Waayen Ogeysiis Haddii aad ku daabacayso waxyaabo tayo sare leh xisaabaadkaaga warbaahinta bulshada isla markaana aad u kordheyso dhageystayaashaada, fursadaha ayaa ah
Arbacada, Nofeembar 16, 2016 Douglas Karr
Waxaa laga yaabaa inaan ku bilowno sababta. Mararka qaar waxaan macaamiisha kala hadalnaa kormeerka baraha bulshada, waxayna dhahaan kuma jiraan baraha bulshada sidaa darteed kama walwalayaan. Waa hagaag… taasi waa nasiib darro maxaa yeelay in kasta oo sumaddaadu aysan ka qaybqaadanayn wadahadallada bulshada, macnaheedu maahan in macaamiishaada iyo macaamiishaada mustaqbalka aysan ka qaybqaadanayn. Maxaad Ugu Baahan Tahay Inaad La Socoto Baraha Bulshada Macaamiil xanaaqsan ayaa khadka tooska ah ee internetka ugala hadlaa jahwareerkooda. Hay'addayada hawl adag ayay qabatay bilo ka hor
12 Hawlood Toddobaadkii Shaqada ee Suuqa Markasta ee Warbaahinta Bulshada
Axad, Disembar 6, 2015 Axad, Disembar 6, 2015 Douglas Karr
Dhowr daqiiqo maalintii? Laba saacadood usbuucii? Wax aan jirin. Warbaahinta bulshada waxay u baahan tahay dadaal joogto ah, oo socda oo loogu talagalay shirkadaha si ay si buuxda ugu rumaystaan ​​awoodda dhexdhexaadka si ay u koraan dhagaystayaasha una dhisaan bulsho Bal u fiirso Liiska Hubinta Baraha Bulshada ee aan horey u daabacnay waxaadna ka heli doontaa inuu u baahan yahay dadaal, xulasho qalab, iyo waqti gelin. Xogtani waa mid aan ku qaadanayo waqtiga maalgashiga loo baahan yahay si loo horumariyo